UBernard Minier. Ukubuyekezwa kochungechunge lwakhe nguMajor Martin Servaz | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Abalobi, Inoveli emnyama
UBernard Minier, elinye lamagama amakhulu ku- i-polar Frances, ukhiphe inoveli entsha ngosuku lokugcina 1. Imayelana Ukuzingela (Ukuzingela) futhi yingxenye yesi-6 efaka isidalwa sayo esidume kakhulu, umphathi UMartin Servaz. Kepha ... kushicilelwe emazweni aseGallic, okwamanje, futhi lapha sesivele sesihambile kulokhu nakwesedlule, Isigodi (Isigodi). Kufanele lokhu ukubuyekezwa kochungechunge yamaphoyisa akho athandwayo ukunikeza ukunakwa nokuthi ngokushesha azofinyelela kubafundi bakho abazinikele engizibala phakathi kwabo.
1 UBernard Minier
2 Uchungechunge lukaMartin Servaz
2.1 Ngaphansi kweqhwa
4 Ungacimi isibani
UBernard Minier wazalelwa eBéziers ngo-1960. Wayezoba ngudokotela futhi wasebenzela iCustoms Service ngaphambi kokuzinikela ngokuphelele ezincwadini. Ngo-2011 washicilela Ngaphansi kweqhwa, owokuqala kumanoveli ayi-6 adlala izinkanyezi UMartin Servaz, futhi impumelelo yakhe enkulu yamyisa esicongweni se- Thriller Ingqondo yesiFulentshi, lapho kunababhali abambalwa ngaphezu kokuvelele. Okulandelayo kwaba Umbuthano, ungacimi isibani, ubusuku nalokhu okusalayo ukufika lapha. FUTHIokuwukuphela komuntu onqobe amahlandla amabili ku- Umklomelo wePolar kuCognac Festival futhi umsebenzi wakhe uhunyushwe emazweni angamashumi amabili futhi wathengisa amakhophi angaphezu kwezigidi ezimbili.
Umlingiswa wakhe owaziwa kakhulu ngu UMartin Servaz, umphathi we Amaphoyisa aseToulouse. Imvelo yakhe, ukuzimisela nobubele, kanye ne vula ubucayi bemizwa isithelo sokubandakanyeka kwakhe emsebenzini, bamenze waba okunye kokulandelwa kakhulu yohlobo.
El indawo yonke azungeze iServaz bagcwalisa yabo indodakazi futhi a imishini labangane ngubani naye okuhle nokubi. Futhi neyakhe nemesis, i-psychopath engenakunqotshwa emlandela ngokungapheli. Kepha akaze entule ukuzimisela ukunqoba ukwesaba kwakhe futhi akwenze kahle.
Uchungechunge lwe- UMartin Servaz
Isihloko sokuqala sisethwe ngoDisemba 2008 nangokubukeka kwesigodi esijulile ePyrenees lapho, lapho besendleleni beya emsebenzini, abasebenzi besitshalo se-hydroelectric bethola umzimba wehhashi elingenakhanda. UServaz uphethe i- uphenyo olubonakala luyicala eliyinqaba kulo lonke umsebenzi wakhe. Kepha konke kukhombisa ukuthi lokhu kungukuqala kwephupho elide nelibi lapho i-psychopath eyingozi ingemuva khona UJulian Hirtmann.
Kwaba yi- ukuzivumelanisa nethelevishini lapho UCharles berling Ubeke ubuso bakhe kuyo, ngokuhlukana kwemibono phakathi komphakathi, ikakhulukazi lowo obhaliwe.
Lapha uServaz usebenza nge ukubulala okubi edolobheni elincane lasekolishi evela eningizimu-ntshonalanga yeFrance, lapho umakhelwane abiza khona amaphoyisa ezokwazisa ukuthi insizwa ihleli echibini lesisulu, eligcwele onodoli abantantayo. Lokho osemncane, obonakala njengomsolwa kuphela, ngu ingane kuphela kaMarianne, uthando olukhulu lukaServaz futhi angakaze ayibone iminyaka engaphezu kwamashumi amabili.
Ngemuva kokukhulu golpe ukuhlupheka ekugcineni kwesihloko esedlule, uServaz ubelokhu bavalelwe esikhungweni yamaphoyisa, elwela ukuyidlula. Kodwa ngolunye usuku uthola ngeposi ukhiye wegumbi lehhotela lapho umculi azibulala khona ngonyaka owedlule. Ubuqili bumholela ekutheni aphenye yedwa ngasikhathi sinye nentatheli yomsakazo, UChristine Steinmeyer, futhi uthole incwadi yokuzibulala.
Bobabili bazohlangana y bazozithola behileleka ezimweni eziya ziba zimbi kakhulu ezizobeka engcupheni izimo zabo zengqondo ezibuthaka.
El ukubulawa kowesifazane osemncane esontweni elisenyakatho ye ENorway thatha umenzeli UKirsten nigaard, wamaphoyisa ase-Oslo, ukuphenya ngomshini kawoyela eNorth Sea. Lapho uthola ukuthi omunye wabasebenzi ubalekile eshiya uchungechunge lwezimpawu ezikhomba I-Servaz. UNigaard uzofika eFrance ukuzojoyina i- sesha futhi ubambe lokho kubonakala kuchazayo i-psycho hirtmann, futhi futhi ngemuva kokubi kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UBernard Minier. Ukubuyekezwa kochungechunge lwakhe nguMajor Martin Servaz